ब्लगमा ब्यक्त गरिने बिचारमा कुनै पनि कुरा श्लिल र अश्लिल हुँदैनन्- विकल्प शर्मा - MeroReport
ब्लगमा ब्यक्त गरिने बिचारमा कुनै पनि कुरा श्लिल र अश्लिल हुँदैनन्- विकल्प शर्मा
सिन्धुपाल्चोकमा जन्मिए पनि काठमाडौंमा हुर्किएका विकल्प शर्माको वास्तविक नाम भने विकल्प होइन । लेखा परिक्षण सम्बन्धि काम गर्ने शर्माले आफ्नो भिन्नाभिन्नै नामका बारेमा यसो भन्छन-'प्रोफेशनल र ब्यक्तिगत जीवन अँझ भनौं बैचारिक जीवनलाई छुट्ट्याउने कोशिस गर्दै भिन्न नामले भिन्न परिचय जनाउन खोजेको हुँ ।' लेखापरिक्षण अलवा उनी सोसल मिडिया र ब्लग लेखनमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन । मेरोरिपोर्टको साप्ताहिक स्तम्भ साताका ब्लगरमा यसपाली हामीले उनै विकल्प शर्मा अर्थात जयराम भट्टराईलाई प्रस्तुत गरेका छौँ । प्रस्तुत छ उनीसँगको कुराकानी :
सुरु यहाँको परिचयबाटै गरौँ, विकल्प शर्मालाई अरुले कसरी चिन्ने?
म लेखापरिक्षण सम्बन्धि काम गर्छु । नयाँबानेश्वर स्थित एक अडिट फर्ममा बिगत डेढ बर्षदेखि कार्यरत छु । कविता कथा लेख्न मनपराउँछु । समाजमा देखिएका विषय, प्रवृति र भोगाईलाई शब्दमा उतार्न मन पराउँछु । साहित्य पढ्छु, खासगरि उपन्यास अँझ, दर्शनका किताबमा पनि मेरो रुचि छ । समग्रमा विकल्प शर्मा विकल्प सहितको ब्यक्ति हो । हा हा ।
सोसल मिडियामा चाँही आफूलाई कसरी चिनाउन चाहनुहुन्छ, एउटा ब्लगरका रुपमा या अरु केही?
बिकल्पलाई एक ब्लगर भनेर बुझियोस् जस्तो लाग्छ र संवेदनशिल, सकारात्मक सोचाइ भएको मिलनसार एक सामान्य ब्यक्ति भनेर चिनियोस् जस्तो लाग्छ । सोसल मिडियामा म आफ्नो वास्तविक परिचय साथ आउन रुचाउन्न । प्रोफेशनल लाइफ र सामाजिक सञ्जालको लाइफ फरक छ । यहाँ सानो-सानो विषयमा पनि टिप्पणी गर्‍यो प्रतिक्रिया जनायो तर वास्तविक जिवनमा परफेक्ट काम गनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाई छ ।
तपाँइले चलाउने ब्लग http://bikalpaa.wordpress.com/ मात्रै कि यस बाहेक अरु पनि छन्?
छैन । तर ब्लगलाई bikalpaa.blogspot.com हुँदै केहि महिना यता bikalpaa.wordpress.com मा ढालेको हुँ । अरुको पढ्छु । आफ्नो त अरु छैन ।
आफ्नो भोगाइ र समाजमा देखिएका अवस्थाहरुलाई चित्रण गर्ने खालका सामाग्री लेख्न रुचाउछु । आफुले जानेबुझेको कुरा अरुले पनि जानुन् सिकुन् भन्ने लाग्छ त्यसैले जीवनको अनुभव शब्दमा उतार्न रमाउँछु ।
ब्लगिङ गर्न कहिलेलेखि थाल्नुभएको हो?
करिब करिब ८ महिना जति भयो ब्लग सुरु गरेको । शब्दहरु कोर्ने रहर सानैदेखि भए पनि कागजमा मात्र सिमित हुन्थ्यो । कती कागज हराए-च्यातिए । कोरिएका शब्दहरुलाई ननासिने गरी राख्न र अरुलाई सेयर गर्ने राम्रो माध्यम ब्लागिङ भेटें । मेरो एकजना मित्रले पनि ब्लागिङ बारे सुझाएका थिए ।
सोझो रुपमा भन्नुपर्दा आफ्ना विषय र समयलाई रेकर्ड गर्न । पछि पढ्दा कम्ता रमाईलो हुदैँन ! अनि अरुलाई पनि मार्गदर्शन होस् भन्ने चाहना पनि छ । हेरौं कसरी अगाडी बढ्छ । समय भ्याए र फुर्सद भएसम्म दिन्छु । अरुको पढ्न समय दिन्छु । त्यस्तो छुट्याएर ब्लगिङका लागि यति नै समय दिन्छु भन्ने चाँही छैन ।
मानिसहरु ब्लगिङ गर्न रहर त धेरै नै गर्छन, तर निरन्तरता दिन सक्दैनन् । तपाईको विचारमा ब्लगलाइ समय दिन गाह्रो भएरै हो या अरु कुनै कारणले होला?
समय र सामग्री प्रमुख कारक तत्व हुन् । लेखेपछि पनि कत्ति कुरा पोष्ट गरौँ कि नगरौँ हुन्छ । अरुलाई पनि त्यस्तै हुदोँ हो । निरन्तरता दिन लेखाईमा निरन्तरता दिनुपर्छ अनि यो क्रिएशन भन्ने कुरा सजिलो पनि त छैन । तर म सकेसम्म निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने सोचाई राख्छु । समय त म्यानेज गर्ने कुरो न हो ।
घुम्न मलाई साह्रै मनपर्छ खासगरि एक्लै घुम्न मनपराउँछु । म जस्तो ठाउँमा पनि घुम्छु, गल्ली, भिडभाड, डाँडा पाखा, एकान्त जस्तो पनि । किनकी मलाई घुम्न भनेरै त्यस्तो रोजी खोजी गरेर हिड्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । अँ साँच्ची, एक्लै घुम्ने भन्दैमा एकलकाटे पनि होइन । हा हा ।
यस बाहेक म साहित्य कोर्छु । खेलकुद र चित्रकलामा पनि सौख छ । केही चित्र कोरेर भित्तामा टाँगेको छु । फुटबल र क्रिकेट म हेर्छु । गीतमा पनि शौख छ । अल्टर्नेटिभ रक संगीतमा बिशेष रुची भएको र कुनै बेला द अल्टर्नेटिभ नामक ब्याण्ड खोल्ने सोचले पनि नेपालिकरण गर्दै नाम बिकल्प राखेको हुँ । अहिले प्रोफेशनल पाटो बाहेक अन्य कुराहरुको ओझन बिकल्प नामलाई दिएको छु ।
ब्लगिङ गर्न कत्तिको सजिलो छ वा कस्ता कस्ता चुनौतीहरु छन्?
सजिलो छैन नि ! ब्लगमा हाल्न लेख्ने विषय हुनुपर्‍यो, त्यसमा उत्कृष्ट विषय पोष्ट गर्नुपर्‍यो, अरु मानिसको पनि रुचिको विषय र पढ्न लायक विषय हुनुपर्‍यो । साथसाथै चुनौती पनि धेरै नै छन् जस्तो कि आफ्नो ब्लगमा निरन्तरता दिनु, निरन्तर लेख्नु, समय दिनु, अरुले फलो गर्न सक्ने बनाउनु त चुनौती नै हो नि !
केही पत्रकार र बैचारिक लेखकहरुले सदुपयोग गरेका छन् । कोहीले भने नकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका सामाग्री पनि राख्ने गरेका छन् । तर सदुपयोग नै भएका छन् पछिल्लो समय सायद शिक्षित जनशक्ति बढेर पनि होला ।
पढ्छु । समाचार, विचार, कथा, कविता भएका ब्लग पढ्छु । दर्शन सम्बन्धि ब्लग पनि पढ्छु । मेरोरिपोर्टमा प्रकाशित ब्लगहरु पढ्छु । माईसंसार, डेल्ली काठमाण्डौँ लगायतका ब्लग म निरन्तर फलो गर्छु ।
लेखनमा स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । विचारमा नै बन्देज लगाउने गरि आचारसंहिता बनाउनु चाँही हुदैँन तर मर्यादित बन्न प्रोत्साहन गनुपर्छ । आचार संहिता केको लागी भन्ने पनि हो । यदि अश्लीलतालाई इङ्गित गर्न खोज्नु भएको हो भने मेरो बिचारमा कुनै पनि बिषय श्लिल र अश्लिल हुँदैनन् । मुख्य कुरा प्रस्तुतिमा भर पर्छ । लेखको नियतमा भर पर्छ ।
कोही कोही आफूलाई निकै ब्यवस्थित ढंगले ब्लगर बनाउँछन् । उनिहरु संयमित भएर एउटै विषयमा लेख्छन् । उनिहरु आचारसंहिता पालना गर्छन् । मानहानी लगायतका विषयमा पनि गम्भीर छन् तर कोही भने समाजलाई नकरात्मक असर पर्ने विषय पनि पोष्ट गर्छन् । यस्तै छ ।
मैले स्कूले लभको विषयमा लेखेको ब्लग देखेर साथीको प्रतिक्रिया पाएको थिएँ । नाम परिवर्तन गरेर पनि वास्तविकतालाई कथामा ढालेको थिएँ । साथीहरु बिच पनि चर्चा भएको थियो । अनि अहिले पनि त्यो कथालाई लिएर हामी एक अर्कालाई जिस्काउने गर्छौ । साहित्यमा रुचिनै नभएका एक मित्रले आमा कवितालाई उत्कृष्ट छ भनेको दिन संधै सम्झिरहन्छु ।
नेपाली मिडियाहरु विभिन्न पार्टी निकट छन् भनेर भन्दा फरक नपर्ला । धेरै जसो राजनैतिक विषय नै प्रमुखताका साथ आउँछन् । त्यसैले ब्लगहरुमा कतिपय विषय निकै राम्रो सँग आएका छन् । च्यारिटी कार्यक्रम लगायतबारे ब्लगहरु प्रभावकारी सिद्ध भएका छन् । सामाजिक कार्यक्रम बारे पनि लेखिएका छन् । गरीब असाहायलाई सहयोगार्थ बिभिन्न कार्यहरु गर्न सुचना केन्द्र पनि बन्दै गएको छ ब्लग ।
ब्लगिङलाई कतैकतै बैकल्पिक मिडिया अर्थात आफ्ना कुराहरु आफ्नै तरिकाले अभिब्यक्त गर्ने थलो पनि भन्ने गरेको पाइन्छ र पनि यो अँझै काठमाण्डौ केन्द्रित मात्र भइरहेको छ, मोफसलमा ब्लगरहरु एकदमै कम छन भन्ने पनि गरिन्छ नि ! किन होला?
प्रविधि उपलब्ध नहुन, ब्लगिङ बारे जानकारी नहुनु, लेख्ने र पोष्ट गर्ने समय नहुनु जस्ता कारण हुन् । अनि ब्लगमा कस्ता विषय पोष्ट गर्ने भन्ने अलमलले पनि होला । मुख्य कुरा चै उत्कृष्ट लेखन शैली भए तापनि ब्लगबारे जानकार नहुनु हो ।
हो । मैले पनि विदेशमा मिडिया प्रतिबन्ध भएका बेला ब्लगले पारको प्रभाव बारे पढेको, सुनेको छु । नागरिकको तवरबाट उनिहरुको भोगाई आउनुले यसलाई वास्तविक नागरिक चरित्रको मिडिया बनाएको छ ।
तपाई सोसल मिडियामा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ, हामीकहाँ प्रयोगमा आइरहेका सोसलमिडियाका थलोहरु ब्लग, ट्विटर र फेसबुकमा के फरक पाउनुभयो? र नेपालमा सोसल मिडियाको प्रयोग कस्तो भइरहेको पाउनुभएको छ?
ब्लगमा विचार र अभिब्यक्ति आउने गरेका छन् । जुन विस्तृत पनि छन् । तर ट्विटर फेसबुकमा सामाजिक विषयमा टिप्पणी मात्र आउँछन् । अझ फेसबुक त फोटो हाल्ने र चिनजानका मान्छेको सम्बन्ध कायम राख्ने विषयमा सिमित हुदै गएको छ । ट्विटरमा भने चिनजान नभएपनि अन्तरकृया र सामाजिक विषयमा मज्जाले खुलेर लेख्न सकिन्छ । कतिपय विषय घर वरिपरि अभिब्यक्त गर्न गाह्रो हुने गरेका छन् । अँझ भनौँ मनमा लागेको तर खुलेर ब्यक्त गर्न नसकिने कुराहरु ट्विटर मार्फत ब्यक्त गर्ने गरिएको छ ।
मेरोरिपोर्टले ब्लगिङका क्षेत्रमा गरेको यो एक सर्‍हानिय कार्य हो । यसले लेख्ने उर्जा मिल्छ । नयाँ ब्लगरहरुलाई प्रोत्साहन मिल्छ । मेरोरिपोर्टले प्लाटफर्म प्रदान गरेकोमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अँ, ब्लग बेकार त होइन नि भनेर सोध्न छुटाउनु भो नि ! हा हा हा ।
Comment by Bikalpa Sharma on November 21, 2014 at 4:25pm
Thank you mero report ...